Amplifinity: Izisombululo zoKwazisa uBrand | Martech Zone
Amplifinity: Izisombululo zoKwazisa uBranti
NgoLwesine, uJanuwari 23, 2014 NgoLwesine, uJanuwari 23, 2014 Douglas Karr
I-Amplifinity yenza ukuba i-B2B, i-B2C kunye neearhente zikwazi ukuhambisa izicwangciso zokukhuthaza ukuthengisa. Izibonelelo zeenkqubo zokukhuthaza intengiso zikhokelela ekuphuculeni ukufunyanwa kwabathengi, ukuyilwa kwabameli abanyanisekileyo nabafikelelekayo, kwaye ekugqibeleni-ukuqhuba ukuthengisa.
Iqonga labo lweshishini lihlehlela kwezi ndawo zilandelayo kugxilwe kuzo:
Iindawo zokubamba zabaThengi -I-AMP idityaniswa nazo zonke iindawo zokuthintela abathengi bethu ngqo kwiinkqubo zabo zeshishini-ngokungena kunye ngeakhawunti yabathengi, iiwijethi ezinamandla, okanye amakhonkco alula.
Iinkqubo zokuxhasa I-AMP yenza kube lula ukucela abathengi bakho ukuba basasaze igama egameni lakho. Sebenzisa iphepha leAkhawunti yam ukulandela umkhondo womsebenzi wabo, inkqubela phambili kunye nenqanaba lomvuzo, abameli bebrand bahlala bezibandakanya kwaye bayazi ukuba babalulekile kwimpumelelo yenkampani yakho.
Igumbi loLawulo -Igumbi loLawulo lwe-AMP livumela ii-brand ukuba zakhe, zilandelele kwaye zilawule iiNkqubo zeNkxaso. Ukucwangciswa kwabo kunye nokwenza ngokwezifiso ukubonelela abathengi ukuba basebenzise, ​​baguqule kwaye balawule inkqubo yabo. Banokucwangcisa kwaye balawule ubeko lwephepha, ukuhamba komsebenzi, kunye nolwakhiwo lomvuzo.
Umdibaniso weShishini -Yenzelwe ukudityaniswa kwenkqubo yeshishini, umsebenzi owenziwe ngeqonga labo, ukusuka ekubhekisweni ukuya kwintengiso evaliweyo, inokudityaniswa ngqo kwinkqubo yakho yeCRM.
tags: ubukhuluuthethelelo lophawu
Uvavanyo lweWebhu, iBhrawuza kunye neziGqibo
KwiNtengiso yeDijithali ka-2014
NgoJanuwari 23, 2014 ngo-3:28 PM